Maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya oo xukun ka fulisay Jawhar. – Radio Daljir
Diseembar 14, 2012 5:14 b 0
Jawhar, Dec, 14- Maxkamada ciidamada qalabka? sida ayaa xukuno kala duwan ku ridday askar ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo xubno ka ka tirsanaa Al Shabaab.
Fadhi ay maanta oo jimcaa Maxkamada darajada Koobaad ee ciidamada qalabka sida ku yeelatay magaalada madaxda g Jowhar gobolka shabeelaha dhexe ee Jawhar ayaa la horkeenay Lix eedeysane oo Afar ka mid ah ay ka tirsanaayeen ciidanka dawladda ,? kuwaas oo lagu soo eedeeyay in ay dhac u geysteen dad shacab ah, halka Labada eedyasane ee kalena lagu soo eedeeyay in ay ka tirsanaayeen dagaalayanada Alshabaab.
Gudoomiyaha Maxkamada ciidanka qalabka sida oo xukunka ku dhawaaqay ayaa sheegay in maxkamadu sii deysay mid ka mid ah labadii lagu eedeeyay in ay ka tirsanaayeen Shabaab, kadib markii lagu waayay wax dembi ah,? halka midka kalena lagu xukumay 5 sano oo xarig ah, Sidoo kale Afar askari oo ka tirsanaa guutada Lixaad ee ciidanka dawladda ayaa lagu xukumay min 5 sano oo xarig ah,? iyadoo maxkamada la horkeenay agabkii ay ka dhaceen dadka rayidka ah.
Dhinaca kale wararka ay daljir ka helayso Jawhar ayaa sheegaya ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya inay maanta baaritaanno guri-guri ah ka billaabay xaafadaha kale duwan ee magaalada Jowhar.